“Faransiiska arrin ugub ku ah ayuu ka sameynayaa dalka Itoobiya” – Kismaayo24 News Agency
by Mohamed Abdirashid Abaajo 14th March 2019 094
Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa arrin ugub ku ah in Faransiisku uu Itoobiya ka caawinayo dhismaha ciidanka badda.
Waxaan isha ku hayey booqashada Madaxweynaha Faransiiska ee Geeska Afrika. Emmanuel Macron wuxuu booqday Jabuuti, Itoobiya iyo Kenya. Inkastoo Faransiisku saldhig Milateri ku leeyahay Jabuuti, haddana in muddo ah Madaxweyne Faransiis ah Jabuuti booqasho kuma imaan. Dhinaca kale waana markii koowaad ee uu Madaxweyne Faransiis ah Kenya booqan doono. Macron wuxuu Itoobiya la saxiixday heshiis “difaaca wadajirka ah ee labada dal”.
Xildhibaanadda Baarlamanka oo gudoonka u gudbiyey Mooshin ka dhan ah Wasiirka…….
Challenges of Leadership in Somalia
Wasaaradda Waxbarashada oo soo bandhigtay sharciga iyo siyaasadda waxbarasho ee dalka